NOOCYADA CAANKA AH IYO NOOCYADA KALA DUWAN EE BUSTAHA: SIDA UBAXADU U KALA DUWAN YIHIIN QAABKA INFLORESCENCE - CHRYSANTHEMUM
Ugu Weyn Ee Chrysanthemum
Noocyo iyo noocyo of chrysanthemums beerta, sida loo doorto ubax beerta
Chrysanthemums - mid ka mid ah ubaxa dayrta ugu caansan dunida oo dhan. Bloomkoodu waa mid aad u badan, oo aan caadi ahayn midab leh oo muddo dheer soconaya. Waxaa jira tiro aad u badan oo ah noocyada kala duwan iyo noocyada dhirta. Maqaalkani wuxuu qeexayaa noocyada caanka ah ee Chrysanthemums iyo noocyada ugu habboon beerta.
Noocyo aan shaw aan ahayn
Chrysanthemum waxay leedahay ilaa 160 nooc iyo in ka badan 1000 nooc. Iyadoo ku xiran qaabka iyo nooca inflorescence chrysanthemums baadiyaha beeraha ayaa loo qaybiyaa saddex kooxood:
aan cagsi lahayn;
Chrysanthemums aan cirridka aheyn waxay u eg yihiin daisies. Waxay leeyihiin qaab ku haboon oo leh xarun furan. Afafka tufaaxa ee midabada kala duwan ayaa lagu meeleeyaa hal ama dhowr safaf oo ku yaal geesaha bartamaha. Petals waa kuwo ballaaran, wax yar ka yar yahay curyaaminta.
Badanaa suugaanta markay sharraxayso walxaha beeraha waxaad ka heli kartaa magac kale duwan ee noocan ah ee chrysanthemums - fudud. Ka dib oo dhan, noocyadan noocan ah ayaa runtii haysta foomka ugu fudud hal-ama laba-heer.
Chrysanthemums fudud yihiin noocyo hore, adkaysi u heerkulka hooseeyo, si fiican u faafin, aan qabin ee daryeelka. Kuwa ugu caansan ubaxyada ugu caansan, kuwaas oo si fiican u qaadata oo u koraan cimiladeena, waa:
Bouquet xilliga dayrta
Noocyadaas waxaa la beeray bishii May, waxayna udhaqaaqayaan laga bilaabo Juun ilaa Oktoobar. Ubax ayaa gaarey 60 cm oo dherer ah. Kala duwanaanta Masquerade waxaa la isku qurxiyo oo leh madaxyo qurux badan oo qurux badan. Ubaxyada noocyada kala duwan ee xaruntu waxay leeyihiin xuduud jaale ah, oo ka soo jeeda xariiqda xayawaanka ilaa geesaha, midabada ayaa isbeddelaya midab kale.
Xiddigaha caanka ah ee Ruby. Dhalinyaro, dhererkoodu gaaro 80 cm. Haysashada midab casaan leh oo casaan leh. Frost-u adkaysta, ku habboon ciidda dhexdhexaad ah qallalan, meelo yar oo hadhuudh ah.
Waa muhiim! In habka kala xulashada noocyo kala duwan waa in la hagaa ma aha oo kaliya midabka iyo qaabka geedka. U fiirso sifooyinka kala duwan ee kala duwan iyo muuqaalada cimilada, ciidda beertaada. Dhirta qaarkeed waxay u baahan yihiin nalal badan iyo kuleyl, carrada qoyan, kuwa kalena waxay u koraan si wanaagsan, meelaha qaboobaha leh carrada dhexdhexaadka ah qallalan.
Waa inaad sidoo kale fiirisaa darajada Gavrish. Waxay ku duubantahay madaxyo qurux badan oo qurux badan. Xaqiiqda aan qabyada lahayn ee daryeelka. Ku adkeysanaya abaaro qabow iyo gaaban. Waxaa la barbardhigaa xagaaga hore si aad u qabow.
Semi-laba nooc oo kala duwan
Chrysanthemums kala duwan ee noocan oo kale ah qaab muuqaal ah, laakiin dhexe ay wax yar ka kicin iyo ka badan raaxo badan noocyada non-Terry. Qoryaha roodh ee midabada kala duwan ayaa lagu diyaariyaa seddex illaa shan safaf oo ku yaal geesaha bartamaha. Laga soo bilaabo hore, noocyo qabow u adkaysta. Waxaa ka fiican in ay xidid beerta iyo waqti dheer ku faraxsan milkiilayaasha leh blooms cajiib ah sida Noocyada kala duwan ee bamam-mirum:
Amazon - Chrysanthemum laan (ubax ma koraan on asaasiga shakhsi kasta, laakiin koraan taajka mid). Waxay leedahay midab qani ah oo lilac ah, oo leh dhexda cagaaran. Bloomsiyada bisha Oktoobar. Iska ilaali barafka.
Natasha - Blooms oo leh madaxyo jaale ah oo waaweyn, waxay gaartaa dhererkeedu yahay 90 cm.
Ma taqaanaa? Sanadkii 2013-ka, Balu Chrysanthemum, oo ka dhacay Beerta Botanisk ee Nitiijka ee Yalta, Natasha Chrysanthemum ayaa loo doortay sida boqoradda ka mid ah noocyada waaweyn ee ubaxyada.
Gariigtu waa bamamiin jilicsan oo leh jilicsan oo cadcad. Qaar ka mid ah ubaxyada dhexe ee dhexda ayaa leh wax yar oo casaan ah. Ubaxa noocyada kala duwan waa mid xiiso leh. Madaxyadu waa kuwo ballaaran, tufaaxuna way ballaaran yihiin, wax yarna waa la gooyaa. Waxay ku jirtaa bilowga Sebtembar.
Sarsi - Blooms oo leh madaxyo cadcad oo cad oo leh xarun liin. Waxay kala-baxaan bilaha Oktoobar ilaa dhaxan. Kala duwan tani waxay u adkaysataa dhaxan habeenkii, cudurada iyo cayayaanka. Waxay si fiican uga badbaadi kartaa cimiladeena.
Isabel - jilicsan ee pyrsanthemum casaan. Aan la qabin daryeelka, u adkaysata jawiga qabow iyo qalalan.
Sidoo kale tixraac foomka of chrysanthemum fudud. Si ka duwan noocyada hore, dhirtaas waxay leeyihiin xarig, oo kor u kacday xariijinta cawska, kaas oo geesaha ka soo baxa laba ilaa shan saf oo tufaax ah. Inflorescences waa sida daisies.
In koox ka mid ah noocyada anemovirus ee chrysanthemums caddaan aad u caan ah. Waxay leeyihiin madax badan oo baraf cad-cad. Gaar ahaan midabka quruxda badan oo qurux badan Eleanor cad. Waxay leedahay midab cad, huruud ah ama casaan, dhererkeedu wuxuu qiyaastii 15 cm, wuxuu uumay si qumman oo waqti dheer ah.
Noocyo khafiif ah
Noocyo khafiif ah waxay tilmaamayaan nooca hoyga caruurnimada. Ubax ee dhirta waa weyn, qurxin leh tiro badan oo saf ah ee tufaax ah. Waxay magacyadan heleen sababtoo ah xaqiiqda ah in tayadooda ay hoos u dhacaan. Isticmaalidda jarida iyo ka kooban ee bouquets luxurious. Waqti dheer ma dhicin. Noocyada ugu caansan waa kareem Gillette, jaalaha Max Riley iyo casaan.
Noocyada Flat waxay aad u la mid yihiin daisies ama daisies. Waxay leeyihiin qayb furan, xitaa dhexdhexaad, cidhifyo taas oo ay ka tagto laba ilaa shan saf oo tufaax ah. Tongues waxay ku taallaa meel dhexe oo ubax ah. Kalluunku wuxuu noqon karaa mid hal-wadaag ah, isla markaana isu geynaya siyaalo badan oo kala duwan (tusaale, cadaan iyo jaalle, casaan iyo burgundy, liin iyo dhar guduudan). Madaxda dhirta waa kuwo waaweyn, laga bilaabo 8 ilaa 15 cm dhexroor. Dhererka wuxuu gaaraa 50 illaa 90 cm, waxay ka tirsan yihiin noocyada ubaxyada hore.
Ma taqaanaa? Noocyada kiriimka ah ee kiriimka ah waa kuwa aan qabin xaalad cimilada iyo carrada. Inta badan waxaa laga yaabaa in lagu beeray beerta.
Wakiilada ugu caansan ee kooxdani waa:
Heesaha sirta ah
Chrysanthemums ee kala duwan ee this waxay leeyihiin inflorescences da 'oo ka kooban tiro badan oo tufaax ah. Petals ayaa labadoodaba labadaba waa la xoqan karaa. Dhammaan luqadaha waxay ka baxaan cidhifyada bartamaha, iyada oo aaney isku dhejin. Wakiilada cagaaran ee noocyada waaweyn ee ubaxa leh. Madaxa dhererkoodu wuxuu gaaraa 15 cm, waxay ku baxaan bisha Sebtembar, waxay u adkaystaan ​​qabowga, waxay qaboobaan si fiican dhulka hoostiisa.
Ka mid ah noocyada ugu caansan ee kooxdani waxay u taagan yihiin:
Kala duwanaanta noocyada kala duwan ayaa sare u kaca xarumaha waxayna isku midka yihiin dhexda dhexe. Qeybta ubaxa waxaa si buuxda loogu daboolay afafka tafaariiqda. Dhanka kale, inflorescences waxay u egtahay mid isku eg, kubad ama shub. Bloom si fiican. Xilliga jiilaalka, hubi inaad daboosho dhirta.
Ugu ku haboon beeritaanka beerta waa noocyo kala duwan:
Waa muhiim! Dhammaan noocyada globular waa thermophilic, koritaanka ay u baahan tahay ciid dabacsan. Sidaa darteed, xaaladaha iftiinka aan ku filneyn, cimilada qaboobaha iyo ciidda leh qaab dhismeed leh, geedka ma qaadan doono xididka.
Noocyo curly ah
Fluorescences ee Chrysanthemums sida ugu badan oo isbiirsan, marmar dhadhamerka. Petals waa cufan iyo foori, inta badan kor u kaco. Foomkani wuxuu siinayaa ubaxa waxoogaa muuqaal ah, oo markaa magaca. Madaxyo waaweyn oo bamam ah, gaarey ilaa 12-15 cm dhexroor. Noocyadaas waxaa ka mid ah:
Laga soo bilaabo ubaxyo waaweyn, nus-labo. Afafka afka ayaa ah mid khafiif ah oo dheer. Waxay ku duubaan tuubo sidaa daraaddeed waxay u egyihiin cirbadaha. Carrabku marar badan ayey isku rogaan.
Wanaagsan xaaladaheenna cimilada waxay qaadaan xidid:
Chrysanthemums of kala duwan tani waa mid aad u qurux badan. Tufaaxu waa muddo dheer oo aad u khafiif ah, waxoogaa yar ayaa isku xoqaya dhinacyada. Waxay ku yaalliin meel u dhaw bartamaha ubaxa, in yar la kiciyo ama la yareeyo. Beerta cawska ee bamam-beemka ayaa u mahadnaqa luqadaha khafiifka ah ee ku dheggan luuqadaha ay u eg yihiin caaro.
Ma taqaanaa? Kiriimyada qaab-shiidaalku u eg yahay ma laha meel dhexe. Waxaa matalaya dhuuban, afka gaaban ee tafaariiqda.
Warshadu waxay leedahay wareega, isku-dhejinta cufan. Madaxdu waxay sameeyaan tiro badan oo tafaariiq yar yar ah. Isla mar ahaantaana, ubaxyada yar yar, oo leh dhexroor qiyaastii 6 cm Qodobbadu waxay ku yaalaan meel u dhow midba midka kale, oo abuuraya saameyn cufan leh. Wakiilada ugu caansan waa:
Qeexida noocyo of chrysanthemums kaa caawin doonaa inaad fahamto kala duwan ee dhirta quruxda badan oo dooran noocyada kala duwan ee la doonayo. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in cimilada iyo ciidda beertaada ku haboon sifooyinka nafsiyadeed ee warshadda, kaas oo ah in dib loo eego marka la iibsanayo wax soo saarka. Xaaladdan oo kale, dhirta ayaa si fiican u qaadan doonta, waxayna ku farxi doontaa ubaxeeda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Chrysanthemum 2020